inguqulelo 0.3.4 – Lebug Udliwano
EyeNkanga 5, 2009 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
Le nguqulelo umise ezinye bugs, ikakhulu edume NexGEN gallery bug (leyo enokwenzeka ezinye iiplagi kusetyenziswa indlela efanayo). Ezinye lweteksti yokusebenza zibandakanyiwe, ikakhulu kubantu usebenzisa MSN Umguquleli (Ngaba qaphela bandileyo inani kweelwimi ewuxhasa?)
Inkqubo entsha yokwakha ukuba basasazwe bume uphuhliso lithetha ukuba kuya kuba lula ukuba ndinikhululele iinguqulelo ezizayo, kwaye baza igcinwe sync kunye yokugcina ikhowudi yemvelaphi.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi singobani kunye nezalathiso bethu nekamva, marco ukusuka Technology ngaphakathi blog baye baqhuba nje udliwanondlebe kunye wethu Ofer Wald. iqhekeza Nice ukufunda nabani na unomdla yaye singathanda ukubulela Marco ukuze umonde wakhe kwaye umsebenzi onzima.
Nqakraza apha ukufunda olu (ngesiNgesi)
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: bing (MSN) umguquli, udliwanondlebe, engephi, khulula, Java Wordpress